IZIBHENO ZOKUGQIBELA ZOKUSETYENZISWA KOMSEBENZI
Izikrini ze-LED zokuqasha izitendi neenkomfa ziipaneli ze-LED ezikwaziyo ukuvelisa imifanekiso ephezulu kunye neevidiyo ezinokukhanya okungaphezulu kwezinye izixhobo, ezinje ngeemonitha zemveli kunye neeprojektha ezingavumeli ukubona umxholo ngokuchanekileyo, nokuba kungenxa yokuqaqamba okanye ukucaphukisa. Ukuboniswa kwimiboniso yabo. Ngale ndlela, ukuqaqamba okungenakubethwa kuqinisekisiwe.
Izikrini zokurenta zilungile kwiingcali ezithatha inxaxheba kwinkongolo okanye kwimiboniso, efuna ukuhlangana ngokulula, izikrini ezilula ezingahambiseki ngokulula ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Ukudityaniswa kweenkqubo zokuhlanganisa ngokukhawuleza kunye nokudiliza izixhobo kuqinisekisa inkqubo yokufaka elula ngakumbi kunye nexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo zescreen se-LED.
KUPHELA UKUFAKA IZIBHENO ZOKUGQIBELA?
Isikrini se-LED esiqeshisayo sinika uluhlu olubanzi lwezibonelelo. Ngaphambili, iindonga zevidiyo kunye neeprojektha zazisetyenziselwa le njongo. Ngoku, ngezikrini ze-LED eziqeshisayo, kunokwenzeka ukuba ube nezikrini ezinkulu kunye nezikhanyayo, ezibambe umdla wababekho kumsitho.
Njengoko izikrini ze-LED ziyimveliso entsha, amaxabiso erenti athanda ukuba phezulu, ke iinkampani ezininzi eziqeshisayo zigqibe ekubeni zithathe inxaxheba kwimfuno ephezulu kwaye zityalomali ngakumbi nangakumbi kolu hlobo lwemveliso.
UKUSETYENZISWA NOKUSETYENZISWA KWENKXASO YE-RED
Ezi zikrini zenzelwe ukuba iingcali ezibonisa iimveliso zazo kunye neenkonzo kwiintlanganiso kunye neenkomfa zingabonisa zonke iimveliso zazo kwifomathi enkulu kwaye ngendlela ehlaselayo. Ababoneleli ngezixhobo zokumamela abaququzelela iikonsathi, imiboniso okanye iminyhadala yentengiso ikwangabathengi be-screen ye-typcal yokuqeshisa, ukuze babenakho ukuyiqeshisa kubantu besithathu.
Izikrini ze-LED zokurenta lolona khetho lufanelekileyo lokuma kuwo nawuphi na umsitho, kuba kunokwenzeka ukumisela kunye nokuguqula ubungakanani bescreen. Ke ngoko, yenye indlela ebhetyebhetye kakhulu yeengcali kwicandelo lokumamela.
Inkqubo yokudibanisa iimodyuli kunye nezinto ezikrelekrele ze-elektroniki zikuvumela ukuba ulungelelanise ubungakanani ngokufanelekileyo. Kuya kufuneka uqokelele kuphela izakhelo ze-LED ezihambelana nobungakanani obufunekayo. Oku kwenza ukuba kube nokwenzeka ukwahlula isikrini esikhulu sokurenta kwiincinci ezincinci.
Olunye uncedo olubalulekileyo sisisombululo esifanelekileyo kunye nomgangatho womfanekiso ezibonelelwa zizikrini ze-LED, ezifanelekileyo njengezona zifakelwe ngokusisigxina izikrini ze-LED. Ngombulelo kwiimpawu zabo zobuchwephesha eziphambili, izikrini ze-LED eziqeshisayo zibonelela ngokubonakalayo ngokuboniswa komxholo wevidiyo, nditsho nangaphandle nakwilanga elipheleleyo.
I-Pixel Pitch Option
I-P3.91 ye-LED yangaphakathi yoMboniso weScreen
I-P2.97 yomsitho wangaphakathi wokuqeshisa isikrini sokubonisa i-LED